ETshayina Umgangatho oPhezulu we-XGN15-12 Uhlobo lweBhokisi eZinzileyo ze-AC Metal evaliweyo yeSulfur Hexafluoride Loop Switchgear Factory abavelisi nababoneleli |Shengte
Umgangatho ophezulu we-XGN15-12 Uhlobo lweBhokisi eZinzileyo ye-AC yentsimbi evaliweyo yeSulfur Hexafluoride Loop Switchgear Factory
XGN15-12 uhlobo ibhokisi esisigxina AC metal evaliweyo sulphur hexafluoride ring switchgear (SF6 switchgear) isixhobo yokuhambisa yangaphakathi kunye nesigaba esithathu ngoku ye-12Kv kunye nokuphindaphinda kwe-50Hz inkqubo yebhasi enye.
Isetyenziswe ngokubanzi kwiifektri, iindawo zokuhlala, izakhiwo eziphakamileyo, iigridi zamandla asezidolophini kunye neendawo zokusasaza zabasebenzisi bokugqibela, iibhokisi ezincinci.
I-SF6 yokutshintsha isakhelo sekhabhathi yenziwe ngokugoba ipleyiti yentsimbi ye-A3 eqhelekileyo (okanye iqatywe ngepleyiti ye-aluminium-zinc) kwiiprofayili.Inenkangeleko entle, ukuxhathisa okuqinileyo kwe-corrosion kunye ne-compact kunye nesakhiwo esifanelekileyo.
Inokwandiswa ngayo nayiphi na indibaniselwano ngokweemfuno ezahlukeneyo zoyilo.Iyakhawuleza kwaye kulula ukuyidibanisa kwaye kulula ukuyifaka.
I-SF6 switchgear eyenziwe yaza yadityaniswa ngendlela esemgangathweni inokwahlulwa ngokwegumbi lebhasi, igumbi lokutshintsha, igumbi lomatshini wokusebenza, igumbi lesixhobo kunye negumbi lentambo.
Ibhasi engundoqo yegumbi lebhasi inokwandiswa ukuya nakweliphi na icala ngaphandle kwesizathu.Inokuqulunqwa ngezixhobo zokutshintsha ezintathu ukwenza iyunithi yothungelwano lweringi, okanye inokwandiswa kwisikhululo esisezantsi esinezixhobo zokutshintsha ezingaphezu kwezine.
Inkqubo yoqhagamshelwano yomthwalo weSF6 kunye negumbi lokucima i-arc litywinwe kwi-barrel yokukhusela egalelwe inkqubo ye-epoxy resin APG, kwaye izaliswe ngegesi ye-SF6 ye-0.045 MPa.Ngenxa yamakhonkco okutywina ambalwa, inokugcina ukuvuza komoya ixesha elide kwaye ithintele ukulungiswa ekugqibeleni.
Isigaba sesithathu soqhagamshelwano oluhambayo lwe-F. switch switch lugxininiswe kwi-spindle e-insulated, eqonda ukuguqulwa kweendawo ezintathu zokusebenza zokuvala, ukuvulwa kunye nokumisa phantsi kwesenzo se-spring mechanism.Kukutshintsha komthwalo weendawo ezintathu.
Isiphaluka sokuqala se-analog kwiphaneli yomatshini kunye nesalathisi sokuvula kunye nokuvala ngokuthe ngqo kwi-shaft ephambili yokutshintsha komthwalo kunokubonisa ngokucacileyo ukuvala, ukuvala okanye ukumisa indawo yokutshintsha umthwalo.
Ukuze kuthintelwe ukusetyenziswa kakubi, ii-padlocks zinokufakwa kwimingxuma yokusebenza ye-shaft ye-mechanical.
I-SF6 yokulinganisa uxinzelelo lwegesi, uqhagamshelwano oluncedisayo, i-coil yohambo, isixhobo sokusebenza kombane, isiphaluka sokulawula, isixhobo sokulinganisa kunye nesixhobo sokukhusela i-relay inokufakwa ngokweemfuno zomthengi.
Ikhabhinethi ye-SF6 inokusebenzisana nomatshini we-CTI wasentwasahlobo kunye neswitshi yomthwalo we-FLN isulfure hexafluoride (ikhabhathi ye-F) okanye i-CTII ephinda kabini indlela yasentwasahlobo kunye ne-FLN isulfure hexafluoride yokulayisha isixhobo sokutshintsha-i fuse edibeneyo (ikhabhathi yeFR).
Igumbi ngalinye lesikhululo sahlulwe ngepleyiti yentsimbi, kwaye igumbi ngalinye lixhotyiswe ngezinto zokukhanyisa.I-G ephezulu ye-transformer ixhotyiswe ngesixhobo sokukhupha ngokuzenzekelayo ukulungelelanisa
Uyilo olulodwa lwekhowudi yekona yecala-ntathu aluphuculi kuphela amandla kunye nokuqina kwesakhelo ngokwalo, kodwa luphucula ukuchaneka komgangatho wesakhelo.
I-Fuse enempembelelo, nasiphi na isenzo sempembelelo yesigaba, isixhobo sokudibanisa i-trigger, kukuvulwa kokutshintsha komthwalo.
I-voltage equaling cover of iibhasi zesebe inokwenza intsimi yombane ifane kwaye igweme iimpazamo zangaphakathi.
I-fuse kunye nesiphelo sokuqhagamshelwa kwekhebula zixhotyiswe ngommese wokumisa, odibaniswa nokutshintshwa komthwalo wokutshintsha.
Indlela yokusebenza yasentwasahlobo inxibelelana negumbi le-cableroom lombane ophezulu ukukhusela ucango lwangaphambili ekuvulekeni xa iswitshi ingasekelwanga kwaye iqinisekise ukhuseleko lomsebenzisi.
Iintambo ezaneleyo ziyakwazi ukwamkela izibambisi zombane, iziguquli zangoku, iziguquli zombane njalo njalo.
Ucango lwangaphambili kunye nefestile yokujonga kunye nesixhobo sokuvala ukhuseleko, sikulungele kwaye sihle ukulayishwa kunye nokothula.
Isidibanisi sekhebula sinokudityaniswa ngokuthe ngqo kwisihlalo se-fuse phantsi kwe-fuse, okanye kwi-tin efakwe kwi-copper bar engaphantsi kwesihlalo se-fuse.Iindidi ezimbini ze-cable connectors ziququzelela uxhulumaniso lwe-single-core okanye i-three-core cables kunye nentloko yentambo elula ekhuselekileyo.
Xa kukho iimpazamo zangaphakathi kwibhasi kunye namagumbi e-cable T. switch, i-directional ekhuselekileyo yokuqokelela uxinzelelo iya kukhokela ukushisa okuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu lwegesi ngaphandle kwekhabhinethi, ukuqinisekisa ngokupheleleyo ukhuseleko lwabaqhubi kunye nezinye izixhobo.
Amagumbi ezixhobo zomculo axhotyiswe ngeefuse ezine-voltage ephantsi, izixhobo zokukhusela ii-relay, kunye namakhadi ombane.Ukuba i-compartment ayanele, ibhokisi yesixhobo inokongezwa phezulu kwikhabhinethi.
I-Cable clamp enobungakanani obufanelekileyo bokutywina kunye nesibiyeli somgangatho wegumbi lekhebula.
HAYI. Igama Iiyunithi Amanani Amagqabantshintshi
1 Umbane olinganisiweyo KV 12 F, FR
2 Ilinganiswe rhoqo HZ 50 F, FR
3 Ikalwe ngoku A 630 F, FR
4 Eyona fuse yangoku A 125 F, FR
5 Ilinganiswe ngexesha elifutshane lokumelana nangoku KA 25 F
6 Ilinganiswe ngexesha elifutshane lesekethe S 4 F
7 Ireyithwe kwincopho enyamezelekayo yangoku KA 63 F
8 Ilinganiswe kwisekethe emfutshane yokuvala yangoku KA 63 F
9 Ireyithwe Umthwalo osebenzayo wokwaphula yangoku A 630 F
10 I-loop evaliweyo yokwaphulwa kwangoku A 630 F
11 Ukutshaja kweCable yangoku A 10 F
12 Uchaso oluphambili lwesekethe μΩ ≤ 150 F
13 Udluliselo lwangoku A 1700 FR
14 Ilinganiswe kwisekethe emfutshane yokwaphulwa kwangoku KA 50 FR
15 Ukunyangwa kweSekethe engundoqo (Akukho Fuse) Μω ≤ 250 FR
16 Umgama ofanayo mm 210±5 F, FR
17 Uwona mgama wamandla okusebenza aphezulu Ukuvala Nm 8~100 F, FR
18 Uwona mgama wamandla okusebenza aphezulu Ukuvala Nm 8~100 Umsebenzi womhlaba
19 Ilinganiswe ixesha elifutshane lokumelana nokutshintsha komgangatho KA 25 F
20 Ilinganiswe ixesha elifutshane lesekethe yokutshintsha kokumisa S 3 F
21 Ukunyamezelwa kweNcopho yeNcam yangoku yoTshintsho lokuQalisa KA 63 F
22 Imizuzu eyi-1 inikwe amandla ombane wexesha elifutshane ukumelana nombane I-Interphase kunye nesalamane KV 42 F, FR
Ukwaphuka okwadwa 48
23 Umbane olinganisiweyo wempembelelo yombane ehlala ixesha elide I-Interphase kunye nesalamane KV 75
Ukwaphuka okwadwa 85
24 Ubomi bomatshini Ukutshintshela ukulayisha 次 2000
Ukwahlula iswitshi 2000
25 Inqanaba lokhuseleko IP3X
Ngaphambili: Umboneleli ogqwesileyo we-KYN28A-12 wentsimbi yangaphakathi enezixhobo zokutsalela ngaphandle
Okulandelayo: Ixabiso leWholesale leHXGN-12 AC High Voltage Switchgear Fixed Metal Closed Loop Switchgear-shengte
Ixabiso leWholesale leHXGN-12 AC High Voltage Swi...
I-GCK(L) Eyenzelwe I-GCK
Eyona KYN28A-12 yentsimbi yangaphakathi yokutsalwa kweArmored S...
Factory Price GGD AC Low Voltage Distribution C...
Factory Price Low Voltage Cable Ukusasazwa kweCable Bo...
Ixabiso elona liPhantsi iVoltage Switchgear GCS Low Volta...